Iwe hauchade kuti uve nehanya nezvekuzadzikiswa kweako Shopify maodha. Isu tinobvisa ngowani pano paFulfillPanda, uye tinopa yakasarudzika odhiyo kuzadzikiswa kune vatengi vako.
Dianxiaomi inogadzira Shopify kuzadzikiswa kuzadzikisa snap paFulfill Panda. Isu tinobatsira Shopify mabhizinesi kuwana zvinotarisirwa nevatengi nekuvabatsira kuendesa maodha nekukurumidza uye zvisingadhuri sezvinobvira.
Shopify inosangana zvisina basa nepuratifomu yedu kuti iite zadzikiso uye manejimendi manejimendi, ichikubvumidza iwe kuti uise pfungwa pakutengesa uye kuwedzera bhizinesi rako pane kunetseka nezvekuzadzikiswa kwechirongwa.
Kubatanidzwa kuri nyore.
Mune matanho mashoma mashoma, unogona kubatanidza yako Shopify bhizinesi kune Dianxiaomi software yekuzadzisa.
Nekudzvanya kwebhatani, unogona kubatanidza chitoro chako uye kupinza maodha ako mumasekondi. Nedhisheni yedu yakapusa ye API, unogona kutanga pasina kuda mugadziri nekuti basa rekumashure rakatogadzirwa iwe.
Yakazara otomatiki kurongeka kuzadzikiswa.
Kana mutengi akaisa odha pane yako Shopify saiti, inoendeswa ipapo kuDianxiaomi yekuzadzikiswa nzvimbo, uko kunosarudzwa, kurongedzwa, uye kutumirwa.
Kubva pakutenga kwevatengi kuburikidza nekuendesa, iwe unogona kuteedzera maitiro ekuzadzikisa maitiro uchishandisa yako Dianxiaomi dashboard.
Shopify kuendesa inokurumidza.
Kana vatenga pamhepo, vatengi vako vanofungidzira kutumira nekukurumidza, kwakachipa.
Unogona kuenda naDianxiaomi, iyo inopa akasiyana emitengo yemitengo uye nguva dzekutumira kuti zvienderane nezvaunoda.
Mirairo yakaiswa pamberi pa4 pm Beijing nguva ichagadziriswa uye kutumirwa zuva rimwe chete!
Kuchengeta ruzivo kunoiswa ipapo ipapo kuchitoro chako cheShopify uye ndokuendeswa kune ako vatengi nekukurumidza apo ngarava dzekutenga.
Shopify's inventory control
Uchishandisa yedu yekuchengetera manejimendi sisitimu, tarisa kuti yakawanda sei stock yauinayo kuzadzikiso nzvimbo. Ruzivo rwese rwunovandudzwa munguva chaiyo, zvichikubvumidza iwe kuodha zvakare zvigadzirwa kubva kune vako veChinese vatengesi pazvinenge zvichidikanwa.
Zadzisa Shopify mirairo nekukurumidza nekudyidzana neFulfillPanda.
Ngatitangei! Taura nesu nekukurumidza!